के हो राष्ट्रिय परिचयपत्र ? किन आवश्यक छ ? सबैले पढ्नै पर्ने लेख::News from Nepal
फिदिम – विश्वका तीन दर्जन भन्दा बढी मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको नागरिकको आधुनिक तथ्याङ्क राख्ने प्रणालीको नेपालमा सोमबारदेखि शुरुआत गरिएको छ । सबै नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण समावेश भएको बहुउपयोगी ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ को सोमबारदेखि वितरण थालिएको हो । नेपाली नागरिकहरुका वैयक्तिक र जैविक विवरणहरुलाई केन्द्रीकृत रुपमा भण्डारण गरी सबै नागरिकहरुको परिचय खुल्ने र नदोहोरिने बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण थालिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा विवरण सङ्कलन भइरहेको पाँचथर जिल्लामा सोमबारदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालिएको छ । फिदिम नगरपालिका वडा नं ४ शान्तिपुरकी १०१ वर्षीया वयोवृद्ध भगवतीदेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको हो । भण्डारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरेर वितरण कार्यको औपचारिक रुपमा शुरुआत गर्नुभयो । गृहमन्त्री थापाले समेत भण्डारीबाट आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र ग्रहण गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानले नै नेपाली नागरिकसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र रहने परिकल्पना गरेको छ । नागरिकले सेवा माग गर्दा वा प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारले कानूनको निर्माण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारीका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण थालिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको निर्माणले व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी समस्या हल हुनाका साथै सबै नागरिकको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणहरु सरकारसँग सुरक्षित हुने अवस्थाको निर्माण गर्नेछ । यस्तै, मुलुकको विकासका लागि यथार्थपरक योजना निर्माण गर्न, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रले सघाउ पु¥याउनेछ । दोहोरो वा नक्कली परिचयपत्र बनाई हुने गरेका आपराधिक कार्य राष्ट्रिय परिचयपत्रले धेरै हदसम्म न्यून गर्न सघाउ पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । आगामी दिन मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गा धनीपूर्जा जस्ता सरकारी कागजातहरुको सट्टामा एउटै कार्ड वा कार्ड नम्बरलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ । कोही नदोहोरिने र कोही नछुट्ने गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले समान रुपमा सेवा वितरण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्रले योगदान पु¥याउनेछ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थाल्ने तयारी गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा सात वटै प्रदेशका १५ वटा जिल्लाबाट वितरण प्रकृया अघि बढाइने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३० जिल्लाबाट वितरण थाल्ने योजना रहे पनि त्यसलाई विस्तार गरेर बाँकी सबै जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको गृह सचिव राई बताउनुहुन्छ ।